डेल्टाले देश चिनाउने चाहना छ
एकता गोल्छा, प्रबन्ध निर्देशक, डेल्टा कम्पनी प्राली
मैले स्कुले शिक्षा बिराटनगरको डिएपी स्कुलबाट सकाए । त्यसपछि चार बर्ष भारतमा पढे । भारतको पढाई सकेपछि यूकेको वारबिक युनिभर्सिटीमा म्याथमेटिक्स पढें र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा थप ३ बर्ष पढेर एमएससी सके । मेरो बिषय ‘म्याथमेडिकल कम्पुटसनल फाइनान्स’ हो । पढाई पछि व्यवहारिक ज्ञान हाँसिल गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यसैले मैले भारतको एक प्रसिद्ध आईटी कम्पनीमा दुई बर्ष नोकरी गरे । त्यहाँ धेरै व्यवहारिक कुराहरु सिक्ने अवसर प्राप्त भयो ।
मेरो सिंगो परिवार नेपालमै बसोबास गरिहेको थियो । म सदस्य भएको गोल्छा परिवार नेपालकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना हो । नेपालको उद्योग व्यपारलाई अगाडी बढाउन मेरो परिवारले धेरै सहयोग पु¥याएको मैले बुझेको थिँए । तर मेरो देशको औद्योगिक बिकासदेखि म पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेको थिइन । किनभने अझै देशले धेरै गर्नु थियो । यसैले मैले पनि आफ्नै देश फर्केर केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाए । उसो त मेरो बाबा राजकुमार गोल्छा मात्र नभएर सिंगो घराना नै नेपालको उद्योग व्यपारमै समर्पित भैरहनुभएको छ ।
म पढाई सकेर सन् २०१६ मा आफ्नै देश बिराटनगर फर्के । बिदेशमा पढ्न गएका हामी नयाँ पुस्ताले केही नयाँ सृजना गरेर देशको उद्यमशिलता बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहना थियो । यसैले मैले बुबाहरुले गरिरहेको उद्योगको पुरानो बिरासतलाई सम्हाल्ने भन्दा पनि आफ्नै नयाँ केही गरौ भन्ने ठाने । यसैले मैले आफ्नो पढाई र रुचि अनुकुलको ‘डेल्टाटेक’ नामको आईटी कम्पनी खोलर सञ्चालन गर्न थाले ।
सुरुमा मैले डेल्डाटेकलाई सर्भिस प्रोभाईडर कम्पनीका रुपमा चलाएँ । तर चाँडै नै कम्पनीले गति लियो र अझै लिइरहेको छ । अहिले हामी विश्वप्रसिद्ध टेक्नोलोजी ‘कबकक’ सँग जोडिएर सफ्टबेयर निर्माणमा पनि जुटिसकेका छौ । बिजनेश राम्रो छ । नेपालमा मात्र नभएर बिदेशमा पनि हाम्रा ग्राहकहरु बढिरहेका छन् । बिजनेश बिस्तार हुँदै गएपछि हामीले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि फैलाउन थालेका छौ । अब हामी सर्भिस प्राभाईडर मात्र होइन, टेक्नोलोजी निर्माता पनि बन्दै गइरहेका छौ । हामीले कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति धमाधम थपिरहेका छौ भने ल्याब र बजार प्रबन्धलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लादैछौ ।
धेरैले मलाई सोध्छन्, बुवाको त्यत्रो जुट उद्योग सम्हाल्न छाडेर तँ किन नयाँ बिजनेशमा जोखिम मोलेर आएकी हँ ? तर मलाई जोखिम मोल्नमै मज्जा लाग्छ । किनभने ‘रिक्स’ बिना उपलब्धि पनि सोचे जस्तो हँुदैन । म सानैदेखी केही न केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मानिस । यसैले बिजनेश पनि केही नयाँ नै गरौ भन्ने लाग्यो । परम्परातगत बिजनेश त बाबाहरुले गरिहनु भएको छ नि, जब पुरानो बिजनेश चलिरहेको छ जमिरहेको छ बहिनी कोमल गोल्छाले पनि सघाइरहेकी छन् भने म किन त्यसैमा सिमित हुन पुग्ने र पुरानै काममा नयाँ जनशक्तिको नयाँ दिमाग र उर्जा किन त्यही मात्र खर्च गर्ने ? यसैले मैले जोखिम मोलेर भएपनि आफ्नै आईटी कम्पनीमा हात हालेको हुँ । मलाई थाहा छ आईटी सेक्टर भनेको बिजनेशकालागि महासागर हो । यहाँ सफल हुन सकिएन भने डुबेर बिलाउन पनि सकिन्छ तर पौडन सकियो भने यसको भबिष्य धेरै फराकिलो छ संसारभर फैलन सकिन्छ । र मलाई विश्वास छ, धैर्यताकासाथ जोखिम मोलेर नयाँ गर्न चाहनेहरुले यो क्षेत्रमा धेरै नयाँ गरेर देखाउन सक्छन् र म पनि अवश्य सफल हुनेछु । भलै म अहिले समुन्द्रमा पुगिसकेको छैन कुँवाबाट भर्खर खोलामा मात्र निस्कन भ्याएकी छु ।
मैले सुरु गरेको बिजनेशमा पैसा बिदेश पठाउन धेरै समस्या छ । पहिले त ल्याउन पनि समस्या थियो । तर अहिले गेटवे बनिसकेकोले ल्याउन समस्या छैन । तर पठाउन भने अझै सजह छैन । जबसम्म बिजनेशमा पैसा लेनदेन सहज हुँदैन तबसम्म हाम्रो बिजनेश फस्टाउन गाह्रो हुन्छ । बैकमा कार्ड सिस्टम सहज भैदियो भने राम्रो हुन्छ । कम्पनीको नाममा कार्ड बन्यो भने पैसा लेनदेनको समस्या सुल्झिन्छ । यसैले सरकारले हाम्रो बिजनेशलाई सहयोग गर्नकालागि बैक प्रमोसन सहज बनाइदिनु पर्छ । अर्कोचाहिँ सरकारले देशमा शिक्षाको लेबल बढाउनुपर्छ । जति जति देशमा एजुकेशनको लेबल बढ्दै जान्छ उति उति आधुनिक प्रबिधि प्रयोग गर्नेहरु बढ्दै जान्छन् र समाज प्रबिधि मैत्री बन्दै जान्छ ।
पहिले त मलाई लाग्थ्यो नेपालमा आईटी कम्पनीहरु एकदमै थोरै होलान् । तर व्यवसायमा छिरिसकेपछि थाहा भयो प्रतिष्पर्धा एकदमै चर्कोरहेछ । यसैले सबैसँगको प्रतिस्पर्धामा अब्बल उत्रिएर नेपालको आईटी बिजनेशमा आफ्नो खास पहिचान बनाउने मेरो सपना हो । त्यसकालागि मैले अलरेडि प्लानिङग पनि गरिसकेको छु । र आगामी दिनमा म क्रमशः सोही प्लानिङग अनुसार अगाडी बढ्दै जान्छु । अर्को नेपालमा एजुकेशनको लेबल धेरै तल भएकोले अझै धेरैले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । धेरैलाई टेक्नोलोजी भनेको झन्झट हो र खर्चिलो हुन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । यो गलत धारणलाई हटाउनु पनि चुनौती हो । किनभने टेक्नोलोजीले जीवन झन्झिटीलो हैन झन् सहज बनाउँछ । खर्चिलो हैन मितव्ययी हुन्छ र समयको बचत पनि गराउँछ । जब मानिसहरुको एजुकेशन लेबल बढ्दै जान्छ धेरै भन्दा धेरैले यसको महत्वलाई बुझनेछन् र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोगमा दक्ष हुँदै जानेछन् । अनि मेरो सपना पनि सकार हँुदै जानेछ ।
जब म बिदेशमा पढेर आफ्नै देश फर्के तब धेरैले मलाई अज्ञानी पनि भने । किनकी हामीलाई बिदेशमा पनि धेरै अफर थियो । हामीले बिदेशमै बसेर पनि बिजनेश सुरु गर्न सक्थ्यौ । धेरै पैसा कमाउन सक्थ्यौ । उसै पनि नेपालको लामो शसस्त्र द्वन्द्व, र राजनैतिक अस्थिरताले देशलाई समस्यामा पारेको र उद्योग धन्दाहरु रुग्ण बनाउँदै लगेको, उद्योगीहरु धरासायी बनेको र उद्यमशिलता पलायन भैरहेको हामीले प्रत्यक्ष देखेका थियौ । धेरै नयाँ पुस्ताहरु नेपालमा किन बस्ने अवसरै छैन, भनेर पलायन पनि भए । तर हामीले पलायन हुने सोच कहिल्यै बनाएनौ । मलाई लाग्छ हाम्रो देश नेपाल उद्यमशिलताकालागि अवसरै अवसर भएको देश हो । यहाँ पनि केही गर्न नसक्नेले अन्त गएर केही गर्न सक्दैन । फेरि हामी नयाँ सोच बोकेका सृजनशिल युवाहरुले आफ्नो देशकालागि केही नगरे अरु कस्ले गरिदिन्छ र । यसैले मैले अहिले नै केही गर्नुपर्छ भनेर जोखिम मोलेरै भएपनि आफ्नो देश फर्केर आफ्नै सफ्टवेयर कम्पनी सुरु गरेको हुँ ।
उसो त हाम्रो समुदायबाट बिजनेशमा पहिचान बनाएका महिलाहरु एकदमै थोरै छन् । त्यो परम्रागत समयको प्रभावले होला । अगाडीको महिला पुस्ता पुरुषलाई सघाउने र समाजसेवामा समर्पित हुन बाध्य भयो । तर अहिले नयाँ पुस्ता त्यत्तिमा मात्र सिमित छैन । हामी जस्ता धेरै नयाँ युवाहरु अगाडी आइरहेका छन् । हाम्रो परिवारबाट पनि म, मेरी बहिनी कोमल, ठूलो बुवा महेन्द्रकी छोरी युक्ति, काका सुरेन्द्रका छोरी अनुज्ञा सहित हामी सबै बिजनेशमा होमिइसकेका छौ । हामी सबै स्वतन्त्र छौ । कुनै छेकवार छैन । परिवारबाट पनि हामीलाई फुल सर्पोट छ । तर हामीहरु अहिले परिक्षाको घडीमा छौ । र, विश्वास छ, हामी सफल भएर आफ्नो पहिचान आफै बनाउन सफल हुनेछौ । मलाई लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै हामी जस्तै अरु पनि नयाँ पुस्ताका महिलाहरु हामीसँग हातेमालो गर्न आउनेछन् र नेपालमा घरानियाँ महिलाहरुले पनि उद्योग व्यपारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको कथाहरु प्रसस्त सुनिने लेखिने र पढिनेछन् ।
धेरैलाई लागेको होला एक त अल्पसंख्यक मारवाडी समुदायको अनि त्यसमा पनि महिलाले के गरेर देखाउन सक्ली र भन्ने । तर मेरो आत्मबिश्वासले होला मैले छोटो समयमै आफ्नो बिजनेशलाई चिनाउन सफल हँुदै गइरहेको छु । धेरैले हाम्रो कम्पनी ‘डेल्टाटेक’ सँग सम्बन्ध बढाउन थालेका छन् । यसले मलाई धेरै हौस्याएको छ । तर म आत्तिने, पात्तिने, मात्तिने खालकी केटी हैन । यसैले समस्यासँगै प्रशंसालाई पनि इजि मानेर म अगाडी बढिरहेको छु । म एउटा असल उद्यमीले कहिल्यै हार मान्नु हुँदैन निरन्तर लागि परिरहनु पर्छ, उपलब्धि एक दिन न एक दिन अवश्य हाँसिल हुन्छ भन्ने मान्यतामा बिश्वास गर्छु । र, एउटा युवा महिला उद्यमी भएको नाताले अरुलाई पनि धैर्य राखेर आफ्नो लक्ष्यमा आगाडी बढ्न आग्रह गर्दछु । किनभने जीवनमा असम्भव भन्ने कुनै कुरै हुदैन, मात्र धेर्यतासाथ गर्ने कार्यको मात्र खाँचो हुन्छ ।
म, सक्रिय उद्यमीहरु आफ्नो बिजनेशमा मात्र खुम्चिएर बस्नुपर्छ भन्दिन । उद्योगी व्यपारी जो भएपनि उ जति सोसियल हुन्छ उति आफ्नो बिजनेशसँगै आफ्नो पहिचानलाई पनि बिस्तार गर्न सफल हुन्छ । अर्को आफ्नो बिजनेशको एकता र अधिकारकालागि पनि समाजिक संगठन र संस्थाहरुमा आवद्ध हुन आवश्यक छ । जसले समसामयिक समाजलाई बुझ्न र सोही अनुसार परिचालन हुन पनि सहयोग पु¥याउँछ भन्ने मान्यतामा म बिश्वास गर्छु । यसैले म आफ्नो समुदायका मात्र नभएर देशका सबै महिला उद्यमीहरुलाई भन्न चाहन्छु, –‘हामीले सकुचित भावना त्यागेर बढी भन्दा फैलने प्रयास गर्नुपर्छ ।
मेरो आफ्नो नीजि कुनै गन्तव्य छैन । तर म हाम्रो ‘डेल्टाटेक’ कम्पनीकालागि भने धेरै आशाबादी छु । एक दिन ‘डेल्टाटेक’ नेपालको मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय तहमा पनि प्रसिद्ध हुनेछ । र म डेल्टाको मदतले आफ्नो देशलाई चिनाउन सफल हुनेछु । मलाई बिश्वास छ, –‘मेरो आत्म विश्वास र धैर्यशाली कर्मले त्यो एक दिन अवश्य आउने छ ।’